“သေလိုက်ပါတော့ အဘတို့ရယ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “သေလိုက်ပါတော့ အဘတို့ရယ်”	24
Posted by Thint Aye Yeik on May 16, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., History, My Dear Diary, Short Story | 24 comments
အောင်ရဲလင်းတောင် ကျနော့်လောက် အောင်ရဲလင်းနဲ့ မတူတာကို…
ကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်က ဟိုဒင်းလမ်းကြောင်းမှာ ဟိုဒင်းခံနေတယ်ဆိုသလိုပဲ… ။
အဲ… အဲ့ဒီထဲက လူလိုပဲလို့ ပြောတာပါ။
လက္ခဏာတွေ ဗေဒင်တွေကို အယုံအကြည်နည်းသူဆိုပေမယ့်… အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်…
တလွဲလွဲတချော်ချော်နဲ့မို့.. မကြာခဏ ကိုယ့်လက်ဖဝါးကိုယ် ပြန် ပြန် ကြည့်မိတယ်။
ကျုပ်လက်ဖဝါးပြင်ပေါ်က နှလုံးလမ်းကြောင်းကို ကြည့်တော့ …
ကျွန်းတင် မဟုတ်… ဖြတ်မျဉ်းတွေရော… ဂငယ်ကွေ့တွေရော…ကြက်ခြေခက်တွေရော… မွစာကိုတက်လို့…
ဆိုတော့ …အဲဒီ လက္ခဏာလမ်းကြောင်း နိမိတ်တွေကပဲ မှန်သလား..
ကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်ကပဲ… တခုခုမှားနေလေသလား မသိ.. ရယ်လို့… စဉ်းစားမိတာပေါ့… ။
ကျုပ် မှန်းလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဆို တယောက်ပြီးတယောက် လွဲတာ ပုံမှန်ကို ဖြစ်လို့…
ပထမဆုံး မိုး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်တယ်.. ။
ရုပ်ကလေးကလည်း သက်မွန်မြင့်ကို တူလေးနဲ့ ငါးချက်လောက် ထုချထားတဲ့ရုပ်လေး..
အသားဖြူဖြူနဲ့ သက်မွန်မြင့်လို မျက်နှာပေါက်ဆိုပေမဲ့ .. အရပ်ကျတော့ ငါးပေခြောက်လက်မရှိတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ပခုံးအောက် အတော်နိမ့်နေတယ်။
အရပ်သိပ်မရှည်လှတဲ့ ကျနော်နဲ့ တွဲသွားရင်တောင် ကျနော်က ဂလန်ဂလား(ကလန် ကုလားမဟုတ်) ဖြစ်ပြီး လူပုလေးနဲ့ လူရှည်ကြီးအတွဲလို ဖြစ်နေရော.. ။
.ပြီးတော့ အဲဒီ မမိုး (ကျနော့်ထက် တစ်နှစ်ကြီး)ရဲ့ မိဘတွေက ဟိုဘက်ရွာက… ။
ကျုပ်တို့နေတဲ့ ရွာက ငကာကိုင်းဆိုတဲ့ ရွာ..။ မမိုးက မကျည်းတောရွာမှာနေတာ။
.ပြဿနာက .. မမိုးရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကျနော့် မိဘတွေက ကျောင်းတော်ကရန်စ ရှိသဗျ… ။
အခုခေတ် မြန်မာဗီဒိယိုဇာတ်ကားတွေလိုပဲပေါ့ဗျာ.. ။
ဆိုတော့ ကျုပ်နဲ့ မမိုး မေတ္တာမျှနေကြတာကို အမေက သဘောမတူဘူး.. ။
ရိုးရိုး သဘောမတူတာတောင် မဟုတ်ဘူးနော်။ “ရှယ်” သဘောမတူတာဗျ။
ဗမာဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ မင်းသမီးစံပယ်မိုးတို့ အာကာမြင့်အောင်တို့ “အထူးသရုပ်ဆောင်သည်”ဆိုတာ ရှိတယ်မဟုတ်လား။
(အခွေမှာကိုက စာတန်းလေးပါတယ်လေ..“စံပယ်မိုး အထူးသရုပ်ဆောင်သည်”တို့… “အာကာမြင့်အောင် အထူးသရုပ်ဆောင်သည်”တို့..
“မို့မို့မြင့်အောင် အထူးသရုပ်ဆောင်သည်”တို့…… /ဆိုတော့ အဲဒီလို မရေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားမှာဆိုရင် သူတို့က ရိုးရိုးပဲ လျှော့ပြီး သရုပ်ဆောင်ကြလားမသိ။
ထားပါတော့… ) အေး အဲ့လိုပဲ…
ကျုပ်အမေကလည်း…ကျုပ်တို့ ချစ်ခြင်းကို ရအောင်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကြီး .. အထူးကို ဝင် သရုပ်ဆောင်တာဗျ…။
.နောက်ဆုံး.. ကျုပ်အမေ .. ဘယ်လောက်ထိ ဇာတ်ပို့ ကောင်းလိုက်သလဲဆိုရင်… ကျုပ်ကို ဟောဒီရန်ကုန်ကို ပို့လိုက်တဲ့အထိပဲ။
မိုးနဲ့ ကျနော် မြေကြီးနဲ့ ကောင်းကင်လို ဝေးကွာသွားရော…။ ရန်ကုန်ကို အလာ…သင်္ဘောပေါ်မှာ ထုတ်ကြည့်မိတဲ့ မိုးရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကိုတောင် ဆွဲယူပြီး …
အဲဒါ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ လောက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျုပ်အဖြစ်ဆိုတော့ … အခုဆို မိုင်ပေါင်းများစွာ အဝေးကြီးက မမိုးတယောက်ကို …
ကျနော်…ပုံဖော်မှန်းဆဖို့တောင် မသေချာ မရေရာတော့သလိုလို….
ရင်ထဲမှာ ဒဏ်ရာရယ်လို့လည်း အရှင်း မရှိတော့ဘူးဆိုပါတော့။
ပထမဆုံး ရည်းစားဦးနဲ့ အဲ့ဒီလို တူးတူးခါးခါး လွဲခဲ့ကြပြီး…နောက်…
ရန်ကုန်မှာ .. ကျုပ် နောက်ထပ်ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဆုံတယ်ဗျ… ။
လှတပတလေးတွေချည်းပဲ သုံးလေးယောက်လောက်နဲ့… ရည်းစားဖြစ်လိုက်သေးတယ်.. ။
အဲဒီထဲက နှစ်ယောက်လောက်ကို ကျုပ်က အတည်ယူမယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်လိုက်သေးတာ.. ။
အတည်ယူပြီး တသက်လုံးလက်တွဲမှာဆိုတော့… သူ့အကျင့်၊ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဓါတ်မတည့်တာလေးတွေ ရှိရင်
ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ကြည့်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်နေရင်းမှာပဲ…
အဲဒီကောင်မလေးတွေနဲ့…အကြောင်းကြီးကြီးမားမား မရှိပဲ ပြတ်တာပဲ.. ။
တယောက်ဆို ကျုပ်နဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရာကနေ ကျုပ်ကိုရွဲ့ပြီး ကောက်ကာငင်ကာကြီး ယောက်ျားတယောက် ကောက်ယူပြလေရဲ့။
အံမယ်..သူ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတောင် လာပေးသေး.. ။ အဟေး။
ဘယ်ရမလဲ… ပြုံးပြုံးလေး သွားလိုက်တာပေါ့ ။ လက်ဖွဲ့နဲ့ တန်အောင် မင်္ဂလာဆောင်မှာကျွေးတာတွေ အဝ တီးပစ်လိုက်ရတာ အမြတ်ပေါ့ ။
အဲဒီ မင်္ဂလာဆောင်ကို သွားတဲ့နေ့က ကျုပ်လုပ်ခဲ့တာ တခု ရှိတယ်ဗျ။
အဲဒီတုန်းက ကျုပ်က (ငယ်စိတ်နဲ့ )ရည်းစားဟောင်း ကောင်မလေးနဲ့ သူ့ခင်ပွန်းလောင်းရှေ့မှာ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့…
ကျုပ်ပါးစပ်ထဲ ထည့်ဝါးနေတဲ့ ပီကေကို ထွီခနဲ ထွေးပြခဲ့တာဗျ.. ။
သဘောကတော့ ဒီကောင်မလေးဟာ ကျုပ်ဝါးပြီး ထွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပီကေပါဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ သင်္ကေတနဲ့ သရုပ်ဖော်ခဲ့တာလေ။
အဲဒီတုန်းကတော့ အဲဒီအဖြစ်ကို အားရကျေနပ်ခဲ့တာ ။
အခုနေ ပြန်စဉ်းစားတော့… အဲဒါ တော်တော် မကောင်းဘူးလို့… ယူဆမိတယ်။
ကိုယ်နဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို အဲဒီလို သဘောထားမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံတာဟာ ကိုယ်ရဲ့ သဘောထားယုတ်ညံ့ရာ ရောက်ပါတယ်။
အဲဒီမိန်းမ ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝမှာ ကိုယ့်ကြောင့် သိက္ခာ ကျသွားတာမျိုးဖြစ်အောင် … ကိုယ်က မလုပ်သင့်ဘူးလေ။ အခုအချိန်ဆို ကျုပ် ဒါမျိုး မလုပ်တော့ပါဘူး။
.နောက်တော့ ကျုပ် ရည်ရွယ်ထားသမျှ ပျက် ပျက်သွားတတ်လွန်းလို့… မရည်ရွယ် ရဲလောက်အောင်ဖြစ်လာရော.. ။
ချိန်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ငှက်တွေက ထပျံသွားတတ်သလိုကြီး.. ။
ဆိုတော့ ..ချိန်ရမှာတောင် စိတ်က မပါချင်တော့ဘူး။
ပစ်ရတယ်လို့မှ မရှိပဲကိုးဗျ…. ။
အခုနောက်ပိုင်း နှစ်ဆယ်ကနေ သုံးဆယ်ပြည့်ဖို့ နှစ်နှစ်လောက်ပဲ လိုတော့တဲ့အချိန်ထိကို..အဲဒီလို ချိန်တိုင်းလွဲတုန်း… ။
တလောက ချစ်သုဝေဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို အင်မတန်ချစ်မိတာဗျာ.. ။
သူ့အပြုံးတချက် သူ့မျက်လုံးတဝင့်မှာကို ကျုပ်အသည်းကြီး အကြိမ်ကြိမ် ဟက်ထိုးလဲကျတာ… ။
.ကြွေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ.. ။ ချစ်သုဝေကိုသာ ရမယ်ဆိုရင် အသေရရ အရှင်ရရဆိုသလိုကြီးကို ဖြစ်လို့… ။
အပြင်မှာ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားရတာနဲ့…
သူ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ရင်ဘက်ပေါ်တင် အိပ်ရတာနဲ့ …
သူ့ဇာတ်ကားမှန်သမျှ မျက်တောင်မခတ် ထိုင်ကြည့်ရတာနဲ့…
ချစ်သုဝေကြီး လင်းလင်းဆိုတဲ့လူကြီးနောက် ပါသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြားတော့ ကျုပ်လေ…. ကမ္ဘာပျက်သလိုပဲ…
အဲဒီသတင်းကြားတဲ့နေ့ဟာ ကျုပ်အတွက်တော့ “ ကမ္ဘာ တစ်ချက်ပျက်တဲ့နေ့ ”။
ချစ်သုဝေကြီးကို စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားရဲတော့တဲ့နောက်တော့ ကျုပ် ပြောင်းကြီး..အဲ..ပြောင်းပြီး ချိန်ဖို့ ထပ် ရှာကြည့်ရတယ်။
အဲဒီမှာ…ထူးခြားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကို သွားတွေ့တယ်.. ။
ဘယ်သူရှိမလဲဗျာ.. ။ အားလုံးသိတဲ့ ဖွေးဖွေးပေါ့ ။
.ဖွေးဖွေးကို အသဲထဲစွဲသွားပြီလို့ ကျုပ် ကြေညာလိုက်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းပြောကြတယ်..
“ဖွေးဖွေးတော့ မကြာခင် ယောကျာ်းရတော့မယ်”တဲ့ ။
ကျုပ်ချိန်လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးဆိုရင် တခြားတယောက်နဲ့ မကြာခင် ရတော့မယ်ဆိုတာကြီးက ထုံးစံလိုလို..ဖြစ်နေပြီကိုးးး ။
ကျုပ် ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကို အဲဒီကောင်မလေး မကြာခင် အခြားတယောက်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ဖြစ်နေပြီလေ။
အခုထိတော့ ဖွေးဖွေးလေးကို ချိန်လို့ကောင်းတုန်းးး ။
ဒီတခါတော့ လူတွေဝိုင်းပြောကြသလို… မဖြစ်ဘဲ ဒီနိမိတ် ဒီထုံးစံကြီး လွဲတော့မယ်ထင်တယ်…
လွဲရင်တော့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ကျုပ်နဲ့ ပေါင်းဖက်ရကိန်း ရှိ၏ပေါ့။ (ပေါင် ဖက်ရကိန်း မဟုတ်ပါ။ ပေါင်ဆိုသော စာသားဘေးမှာ “း” ပါ ပါသည်။ )
.ပေါင်းဖက်ရကိန်း ရှိပြီဆိုမှတော့ ပလို့ဂျိ ပေါ့ဗျာ.. ။
အဲ… အဲဒီလို စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေတုန်းမှာပဲ..
ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ် တညနေက… ကန်ဘောင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံပြီး …
အဲဒီမှာ ဇင်မာဆိုတဲ့ အပျိုကြီး (ဒဿဂီရိ မီးကျွမ်းထားတဲ့ ဥပဓိရှိ) သူငယ်ချင်းမက ကျုပ်ကို စကားတခွန်း ပြောတယ်။
သူ ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ကျုပ်ဖြင့်… စူပါလီမွန်တီးမသောက်ရဘဲနဲ့… “ ထိ ”သွားတယ်ဗျာ.. ။
“ ဟဲ့ .. သူရ.. ဒီတခါ နင် ချိန်တဲ့တယောက်နေရာမှာ ငါ့ကို ထားစမ်းပါ..။ ငါ့ကို ကြိုက်တယ်လို့ နင်ပြောပေါ့။
ဒါမှ ငါ တခြားတယောက်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင် မြန်မြန်ကျမှာ ” တဲ့ ။
(အဘတို့နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့… တခြားသူတွေကို မသေစေချင်လို့ အဲ့လိုပဲ “တ”လိုက်တာ)
(ဘာရယ်မဟုတ် ကိုယ့်အကြောင်းထဲက တချို့ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပျော်အနေနဲ့ ရေးကြည့်တာပါ)
၂၀၁၅ ၊ မေလ ၁၆ ရက်
kai says: ဆင်းရောင်လွန်ငြား။ လူချစ်များနှင့်၊ သူ့မယားတထွေ၊ ဥစ္စာလိုဘိ၊ ဣတ္တိငါးမျိုး အတွင်းဆိုးကို မြတ်နိုးအမြဲ မမှီဝဲနှင့်..တဲ့..။
ငယ်တုံးဆို… ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ယူဟေ့…။ နှလုံးသားနောက်လိုက်..။
ကြီးလာပြီးအလုပ်အကိုင်နဲ့တည်တန့်နေပြီဆိုရင်တော့လည်း.. နှလုံးသားနောက်လိုက်. .. ဦးနှောက်ကူ…
Alinsett @ Maung Thura says: ကိုယ်ကြိက်တာကြီး မရရင်ဂေါ…. ရရာ ဆွဲ ယူလိုက်ရမား…
(ကိုယ့်ကြိုက်တာက ဖွေးဖွေး – ရရာ ယူလိုက်ရတာက ဒေါ်ဖွားမေ)
​ဒေါ် လေး says: သင်္ကြန်​ တုန်းက ​တောင်​ ​ဖွေး​ဖွေး ပုံ​လေး ပွက်​​လောရိုက်​သွား​သေး
Alinsett @ Maung Thura says: .ငမ့်… ဘယ်လို ပွက်လောရိုက်တာလဲ ငင်…
Alincho says: ဟာဟ စွံနည်းတော့ တွေ့ပဟ :-))) ဟီးဟီး နောက်ထှာ…
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုလင်းက ဦးမိုက် (ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး)နဲ့ ဘာတော်လဲဟင်၊ ဓါတ်ပုံထဲမှာ တော်တော်တူလို့:p:p ငိုနဲ့နော်၊ တိတ်တိတ်။ စတာ တကယ်…
Alinsett @ Maung Thura says: ဟိုက မိုက်တီး
ဒါမဲ့ FB မှာတော့ Fri အဖြစ်နဲ့ စကားတွေဘာတွေ ပြောဆိုနေတာပဲံ
အနော်က အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိုတူပါတယ်ဆိုမှ
lu lu says: အင်းးးးးးးးး
ဝါးထားတဲ့ပီကေ ထွေးထုတ်လိုက်တာ အမှားကြီးမှားတာပဲ
အမှန်ဆိုမျိုချ သင့် အဲ ပီကေနေရာမှာ ချိုချဉ် ဖြစ်သင့်တာ
ဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေ အဝှာရကုန်တာ
အလက်ဇင်း အထူးတရုတ် အဲ သရုပ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်
Alinsett @ Maung Thura says: ဂျပန်လုပ် တရုတ်တူပါတယ်ဆို. . .
ခင်ဇော် says: ရီ လိုက်ရတာ ဆက်ဆက်ရယ်..
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စပျစ်သီးးတိုင်းး ခြောက်သွားးတဲ့ မမဂျီးး အဖြစ်ကတော်သေးးတာပေါ့နော်..
Alinsett @ Maung Thura says: အဟီးးး မမဂျီးရဲ့ အလွဲတွေထက် ဆိုးသလိုဗဲ
Ma Ma says: ဗေဒင်ဆရာလုပ်ပါလား ဆက်ဆက်။
ကျိန်းသေစွံအောင် ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်ပေးနိုင်သည်ဆိုပြီးတော့ပေ့ါ……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: အဟီးး ဟုတ်တယ်နော်
အဲ့တစ်ချက် ဟောတာနဲ့တင် ကမ္ဘာကျော်မှာာာ
မြစပဲရိုး says: လက်စသတ်တော့ ဟို အဘ တွေ အကြောင်း မဟုတ် ဘဲ ဒီ က အဘ အကြောင်းကိုး။ . ဖွေးဖွေး စွံသွားရင် နောက်တစ်ယောက် ချက်ခြင်း ပြောင်းချိန်ဖို့ တော့ ပြင်ထားပါလေ။
ပလန် ဘီ တို့ စီ တို့ ဒီ တို့ ပေါ့။
ဇီဇီ့ အပြောအရ ဆို ပလန် ဇက် ထိ ၂၆ယောက် အထိပေါ့။ lol:-))))
Alinsett @ Maung Thura says: ၂၆ ယောက်… အဟီး နည်းသလားလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: အော်ထိုက်လို့အော်ရတာအော်သာအော်မောင်ရင်
Alinsett @ Maung Thura says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ကျိမ်းကျေအောင် ငှက်ပြောဒုံး ဖတ်အိတ်အကွဲ့
Alinsett @ Maung Thura says: ငှက်ပျောတုံးကြီး ဖက်တာထက်စာရင် အရုပ်မ ဖက်တာမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်…
အဟိ….ဖွေးဖွေးနဲ့ တူတဲ့ အရုပ်မတစ်ရုပ်လောက် လက်ဆောင်အဖြစ် ဝယ်ပို့ ပေးပါ ဦးကြောင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဘတို့ သေဖို့ မအားသေးဘူး။ ယူစရာ မိန်းမတွေ အများကြီးကျန်သေးလို့
Alinsett @ Maung Thura says: လုပ်ကြပေါ့… အဘတို့က အဘတို့ပဲ..
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို အဘတို့ ကိုယ်တိုင် လိုက်နာနိုင် / မနိုင် ( ပလို့ဂျိ )
အောင် မိုးသူ says: မိန်းမမယူနဲ့တော့ ဒညင်းဝက် ယောက်ျားပဲယူတော့ ခိခိ
Alinsett @ Maung Thura says: .ယောက်ျားတွေ ကောင်းမှ မကောင်းတာ…
.ယောကျာ်းတွေဆိုတာ လိမ်ရင်လိမ်… မလိမ်ရင်ကောက်…
ဆိုတော့… မိန်းမပဲ ယူမှာ…
ယူပြီး ကလေးတွေ တန်းစီ မွေးခိုင်းပစ်မယ်…
ဘာမှတ်နေလဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အသာလုပ်ပါကွယ်..ရှိသမျှမင်းသမီးတွေလည်းလင်ရကုန်တော့မယ်
အခု မြန်မာမင်းသမီးထဲက ပလန် B အနေနဲ့ ကြိုက်ဖို့ ရှာမတွေ့သေးဘူး
အဲ နိုင်ငံကျော်ပြီး ထိုင်းမင်းသမီးတယောက်ကို သွားကြိုက်မိနေတယ်
The Swimmers ဇာတ်ကားထဲက သရဲအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးလေးးး